Drafitra momba ny fifandraisana amin'ny fifandraisana | Reef Resilience
Inona no atao hoe Communication Strategic?
Ny fifandraisana ara-barotra dia ny fampiasana fikendrena fifandraisana mba hahatratrarana tanjona iray na vokatra manokana. Momba ny fahazoana hafatra tsara amin'ny olona (na ny mpihaino) amin'ny fotoana mety amin'ny alàlan'ny fantsona havanana mba hahatratrarana tanjona iray.
Azo ampiasaina amin'ny:
Manangana fanohanana amin'ny hetsika na politika manokana
Manaova fanentanana momba ny olana manokana na politika
Mamolavola sy manova politika ampahibemaso
Fihetseham-panafihana manodidina ny lohahevitra manokana na olana
Ny fiheveran'ny vahoaka ny fiantraikany amin'ny lohahevitra, olana, na politika
Hamafiso ny fifandraisana amin'ny mpihaino manokana
Jereo ny famelabelarana fohy momba ny fifandraisana stratejika sy ny fizotran'ny fandrindrana:
Nahoana no Ilaintsika Izany?
Mihamaro ny olona mamoaka fampahalalana - fampahalalam-baovao be loatra mba hikolokolo sy hivoatra, izay tena very tanteraka. Ny fanadihadiana vao haingana any Etazonia, ohatra, dia mampiseho fa ny Amerikana any Afovoany dia tafalentika miaraka amin'ny hafatra rehetra amin'ny 30,000 isan'andro, ary ny fironana 5,000 amin'ireo dokam-barotra. Ny fifandraisana ara-barotra dia manampy antsika hisaintsaina sy hisafidy ny fomba fifandraisantsika, noho izany ny hafatr'ireo hafatra dia mitsangana sy manatratra ny mpihaino antsika, fa tsy miditra ao anatin'ity "fampielezan'ny fampahalalam-baovao ity." Manampy antsika hahatakatra ny toerana tiantsika hatao (tanjona) sy mifantoka sy mifehy ny fomba hahatongavana any, ary mitantana ny fotoanantsika sy manome lanja ny loharano voafetra.
Ahoana no Hahaizako Mampifanaraka ny Fifandraisako Amiko?
misokatra amin'ny varavarankely vaovao manokatra fisie PDF
Tsindrio ny sary etsy ambony raha te hiditra amin'ilay mpitari-dalana
Mba hampivelarana paikady na drafitra fifandraisana mahomby dia mila andiana fanapahan-kevitra stratejika. Amin'ity torolàlana an-tserasera ity dia handeha hamaky ireo hevi-dehibe momba ny fanapaha-kevitra izahay, hanosika anao hametraka fanontaniana mety hitarika valiny mety amin'ny tetikasanao. Ity fizotry ny fandrindrana ity dia mifototra amin'ny Spitfire Strategies 'Smart Chart® stratejika fifampiresahana fifandraisana sy fitaovana maro hafa ary fitaovana enti-miasa. (Jereo ny lisitry ny loharano ao amin'ny faran'ny fizarana drafitra.) Nofintininay ity atiny an-tserasera ity, ao anatin'izany ny takelaka sy rohy mankany amin'ny horonan-tsary sy loharano misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy tarika stratejika momba ny serasera momba ny fiarovanamanokatra fisie PDF .
Iza io Guide io?
Ity tari-dalana ity dia natao hanampiana ireo mpitantana loharanon-karena an-dranomasina sy ireo mpitsabo amin'ny fiarovana izay tsy dia misy fiantraikany amin'ny fifandraisana amin'ny serasera dia lasa mpampita vaovao mahomby. Afaka mampiasa ity mpitari-dalana ity ianao - amin'ny tenanao manokana, ao anaty tarika madinika miaraka amin'ny mpiara-miasa avy amin'ny fikambanana / orinasa / vondrona mpiara-monina, na miaraka amin'ny mpiara-miasa. Ny zavatra rehetra tokony hanombohana dia tetikasa iray - mety ho hevitra, mandatehezana, tanjona, fandraisana andraikitra, sns. - ary ny fotoana handehanana amin'ny drafitra drafitra. Manoro hevitra anao izahay hanokana farafahakeliny iray manontolo andro hanoratana ny drafitrao.
Ho an'ny tetikadin'ny fifandraisana mahomby indrindra, dia manampy ny olona iray hanana traikefa amin'ny fifandraisana amin'ny ekipa tetikasa na asaina hanohanana ny ekipa. Azonao atao ihany koa ny manolo-tanana amin'ireo mpitantana hafa, ireo mpitsabo ary ireo manam-pahaizana momba ny Network Forum ho an'ny fanamarihana, hevitra, famerenana, ary fanohanana ara-moraly.
Ahoana no iandraiketan'ity Guide ity?
Manomboka amin'ny famaritana ny tanjonao ny fananganana drafitr'asa ara-barotra, avy eo dia mandroso amin'ny famaritana ny mpihaino anao, ny famoahana hafatra mahomby, ary ny fomba amam-panao sy ny tetika hamantarana ireo hafatra ho an'ny mpihaino anao. Ny dingana farany dia ny fandrefesana ny fahombiazan'ny ezaka ataonao sy ny fanatsarana ny tetikadinao raha ilaina.
Ho an'ny dingana tsirairay ao anatin'ny dingana famolavolana, dia hampidirina amin'ny foto-kevitra manan-danja ianao ary hosedraina fohifohy mba hanamafisana ny fampahalalana, dia ho afaka hampihatra izay nianaranao tamin'ny tetikasanao tamin'ny alalan'ny asa ianao.
Ny asa vita asa aman-draharaha dia azo alaina maimaim-poana ka ahafahanao manendry azy mivantana na manonta azy ary manoratra amin'ny tanana. Ho fanatanterahana ireo asa vita, dia mila fitaovana fanoratana sy fandaharam-potoana ianao.
Ny dingana ara-drafi-pifandraisana stratejika dia linitera ary manasongadina fe-potoana fito na fanapahan-kevitra fototra, miaraka amin'ny dingana tsirairay na fanapahan-kevitra amin'ny fananganana manaraka:
Amboary ny tanjonao sy ny tanjonao
Diniho ny teny manodidina ny ezaka ataonao
Fantaro ny mpihaino anao (s)
Ataovy ny adiresinao (s)
Ampahafantaro ireo iraka sy tetika hampitaovana ny hafatrao
Diniho ny fiantraikanao
Mamoròna famintinana ny drafitrao
Ity rafitra ity dia manampy anao handroso mankany amin'ny tanjona amin'ny fomba hentitra sy mandanjalanja. Mamela anao koa izy hamaly ny toe-javatra miova sy vaovao vaovao - ampahany manan-danja amin'ny fifandraisana mahomby ary mandrefy ny vokatra na ny fiantraikan'ny fifandraisana aminao.
Mandehana any amin'ny Dingana 1: Mametraha ny tanjonao sy ny tanjonao